Tag: twitter mgbasa ozi | Martech Zone
Tag: twitter mgbasa ozi
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụwa anakwerela ọwa mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ, m nọgidere na-abụ onye na-akwado Twitter. Na Twitter na-aga n'ihu na-enyere aka na-ebugharị okporo ụzọ na saịtị nke m na nke ọkachamara ka m wee ghara ịhapụ ya n'oge na-adịghị anya! Njikọ Audiense bụ ikpo okwu wuru maka Twitter Twitter Marketing ma tụkwasịrị obi ya ọtụtụ puku ụdị na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa na: Nchịkwa Obodo na Nyocha - Nweta ozi ziri ezi banyere obodo gị
Satọde, Febụwarị 17, 2018 Sọnde, Febụwarị 18, 2018 Douglas Karr
Nrụgide nke ndị na-ere ahịa, ndị nwe ụlọ ahịa na ndị ọchụnta ego iji mepụta ezigbo mma, mkpọsa izizi adịtụbeghị ka ọ dị ugbu a. Enweghi ihe omuma ihe omuma na atumatu okike o gha esiwanye ike iguzogide ogba elu. Design Wizard bụ ngwanrọ eserese dị na ntanetị nke na-enye ndị mmadụ ngwa ngwa, dị mfe ma dịkwa ọnụ ala iji mepụta ọdịnaya anya. Kwa ubochi, enwere ihe kariri onyonyo 1.8 nke edeputara na ntaneti
Hey Twitter, Agbalịrị m Mgbasa ozi na Lee Ihe Mere
Wednesday, May 18, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Agụla m nyocha dị iche iche na mgbasa ozi Twitter. Ebe ọ bụ na ejighị m ya n'onwe m, echere m na ọ ga-abụ ihe kwesịrị ịgba. Ọ ga-amasị m ịdọta ụfọdụ ndị ọzọ na akaụntụ teknụzụ Teknụzụ Twitter ma achọrọ m ịhụ ma ụfọdụ mgbasa ozi ga-enyere aka. Echere m na anaghị m achọpụta. Hey @TwitterAds, agbalịrị m iso gị nwee ego mana ị gaghị ekwe m ka m jiri nlezianya mee nhọrọ nzacha iji belata.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze bụ ọdịda
Mgbe m banyere n’ahịa mgbasa ozi ọdịnala, a dọtara m ozugbo na ihe ejiri data arụzu. Data duziri ule na nkwuputa anyi na ahia na mgbasa ozi, nye anyi akuko na ntule ziri ezi, ma nye anyi nkọwa doro anya nke ndi ha bu, ihe ha choro, ebe ha di, ebe ha choro na otu ha choro ya. Mgbasa ozi bụ njikọ dị mgbagwoju anya nke akwụkwọ ozi ogologo oge, kaadị post, mgbasa ozi akwụkwọ akụkọ, oku olu,
SocialFlow na-emezi ọhụhụ na njikọta nke ọdịnaya gị na Facebook na Twitter site na ịme ka oge na ntinye nke ọdịnaya gị dị mma. SocialFlow na-eme nke a site na iji data oge iji ghọta ọdịmma na-agbanwe agbanwe nke ndị na-ege gị ntị, wee depụta ọdịnaya gị na windo ebe ị ga-elebara anya. SocialFlow na-enye 3 Ngwọta Ngwaahịa: Cadence - Optimized Publisher ™. Cadence na-enyocha data mkparịta ụka ozugbo ma na-enyefe ndị na-ege ntị ziri ezi ozi gị na akpaghị aka